घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू एल्टन सोर्स बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले फुल स्टोरीको फुटबल प्रतिभाशाली प्रस्तुत गर्दछ उपनाम "सानो प्याज"। हाम्रो Everton Soares बचपन स्टोरी प्लस अनकल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरु को एक पूरा खाता ले आफ्नो बचपन को समय सम्म पूरा गर्दछ।
एभरेन्स सोरेस बचपन स्टोरीको मिति- विश्लेषण। क्रेडिट स्थानान्तरणमार्केट.
हो, सबैलाई थाहा छ कि त्यो 2019 COPA अमेरिका टूर्नामेंट मा देखा जस्तै गति, कौशल र परिष्करण क्षमता संग एक विशाल स्ट्राइकर छ। तथापि, केवल केहि कम गर्दछ Everton सोर्स 'जीवनी जो एकदम दिलचस्प छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
एल्टोन सोर्स बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
बन्द गर्दै, उनको भित्री नामहरू Everton Sousa Soares हुन्। Everton (Everton फुटबल क्लब होइन) या Cebolinha को रूप मा वह लोकप्रिय रूप से कहा जाता है मार्च 22 के 1996nd दिन ब्राजील, मार्कोनाउ की नगर पालिका में ब्राजील के माता पिता को जन्म में पैदा हुआ था।
धेरै विनम्र परिवारको जन्म भयो, एभरटनका आमाबाबुहरू कम-मध्य मध्य-वर्ग आय आयोजक थिए जसले केवल आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको लागि कम खर्च गर्न सक्थे। एक केटाकेटीको रूपमा, फुटबल खेल्दै उमेरको उमेरमा सुरू भयो जुन जान्थ्यो कि कसरी जान्छ।
एल्टनले आफ्नो बचपनको कठोर वास्तविकताबाट टाढा पत्ता लगाउने आफ्नै तरिकाको रूपमा फुटबल गरे। उहाँले आफ्नो निर्णयलाई गलत निर्णय गर्नबाट फुटबल गर्न एक माध्यमको रूपमा फुटबल लिनुभयो।
एवर्टनले नगरपालिकामा बृद्धि गरे जहाँ लाखौँ केटाहरूले हरेक दिन उनीहरूको छातीहरू लुगा लगाए तापनि उनीहरूले अर्को फ्याक्ट्री लिने आशा गरेनन् तर उनी फुटबल खेलाडीहरू खोज्न चाहन्थे। उनको लागि, सबै एक फुटबलर बन्न र उनको परिवारलाई उज्ज्वल भविष्य दिन चाहान्छ।
Everton Soares Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
एभरटन जस्तै अन्य बच्चाहरु जस्तै उनको विशाल भूमिका मोडेल जस्तै - काका, रोबिनो, रोनाल्डो डे लीमा जस्तो देखिन्छ। उनी जान्दथे पेशेवर फुटबलर बन्न चाहन्थे एक सफल र आकर्षक क्यारियरको लागी।
अन्य ब्राजिलका बच्चाहरू जस्तै, अवसरका ढोकाहरू उनको लागि सडक फुटबल खेल्छन् जुन उनले कठोर परिस्थितिमा खेल्थे।
जब एवर्टनले उनीहरूलाई आफ्नो कौशल फुटबलमा फुटबल खेलिरहेका थिए, उनीहरूले आफ्नै बलमा किन्नको लागि पर्याप्त पैसाहरू पाएनन्, त्यसैले उनले आफ्नो परिवारको घरमा निजी खेल खेल्नका लागि पुरानो मोजाहरू बनाएका बलहरूको प्रयोग गरे।
एथेटनले उनीहरुका खेलकुदहरुलाई सम्मान गरिरहेसम्म उनी 12 थिए, उमेरले उनी फोर्टलेजामा फुटबल परीक्षणमा भाग लिन बोलाइन्। धन्यबाद, उनको जुनून र दृष्टान्तको दृढताले उनी तिनको परीक्षाहरू गुमाए र अकादमी संग नामांकन गरे।
Everton Soares Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
एक विनम्र परिवारको किशोरावस्थाको रूपमा, एथेटनले उनको पहिलो क्लब, फोर्टलेजा एस्स्पेस क्ब्यूको लागि प्रशिक्षण सत्रको लागि लामो समयको अन्तको सामना गर्यो। यो ब्राजीलका क्यारेडामा फोर्टलेजामा आधारित क्लब हो।
"Everton साइकल द्वारा आयो। उहाँले सधैं 6km वरपर प्रशिक्षण मैदानमा पुग्न चक्र गर्नुहुनेछ। उहाँ सँधै केही शब्दहरू आरक्षित हुनुहुन्थ्यो, तर सधैं कुटिल। " क्लब मा एक पूर्व युवा कोच मार्फिसियो सेटोनो सम्झन्छ।
जवान एवर्टनले आफ्नो परिवारको घरबाट प्रशिक्षण मैदानमा6किलोमिटर यात्रामा एक घण्टा अगाडी बढ्यो र एफ्रो गरे। तिनका आमाबाबुले पनि त्यहाँ त्यहाँ धनी भएनन् उनीहरूको छोराको खोजीमा पेशेवर हुन धेरै सहयोगी थिए। यो उनको बुबाको हस्तक्षेप थियो जसले उनलाई क्लबको साथ अवसरहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्यो।
उदाहरणका लागि, त्यहाँ एक टूर्नामेंट थियो जहाँ एथटनले खेलिनन् र उनको बुबा क्लबले आफ्नो छोराको समावेशलाई टूर्नामेंटमा लड्नको लागी क्लबमा आए। पहिले क्लबले उनलाई मौका पाएको थियो। एभटनले पिचमा आए र 30 मिनेटमा तीन गोल गर्यो।
उनको गति र उनको आक्रामकताले ग्रेमिओ स्काउटको आँखालाई समात्न थाले जसले तिनीहरूलाई जस्टिनमा साइन इन गर्न आवश्यक थियो। यो घटना वर्ष 2012 मा भयो।
Everton Soares Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
एक किशोर किशोरावस्थामा ल्याइएका सम्झौतालाई देशको विपरीत अन्तमा 3,800 किलोमिटर टाढा लैजाने हो। यो जरूरी थिएन कि प्रतिज्ञाजनक युवा अगुवालाई डराउने दूरी, तर उनको प्रेमिका जसको त्यो पछि कहिल्यै छोड्न चाहँदैनन्।
ओभरटन सोर्स रोड अफ फेम स्टोरी
एक उग्र एवटनले गहिरो प्रेमलाई मन पराउँथे र उसलाई धेरै मनपर्थ्यो, एउटा भावना जसको कारणले उनीहरुले आफ्नो क्यारियरको बारेमा धेरै चिन्ता गर्थे। उनले सोधे कि यदि उसले त्यहाँ जान्छ भने, उसले उसलाई हराउने खतरा हुनेछ। आफ्नो कोच संग कुराकानी को मुद्दा मा बहाल। उहाँको कोचका शब्दहरूमा ...
"मैले उसलाई भनें कि केटी उनको लागि पर्ख्न सक्छ, तर त्यो किरमोयो थिएन। अर्को केटा जसले दोस्रो पछाडीको पछि लागेका थिए उनलाई प्रतिष्ठित क्लबमा बदल्नेछ। त्यसपछि उसले यसलाई पछ्याउनेछ र अर्को केटा समृद्ध हुनेछ र उसले गरिब रहनेछ।"Everton को कोच को सल्लाह दिए।
क्लबमा अर्को व्यक्तिले पनि सल्लाह दिए: 'यदि यो केटी तपाईलाई पर्खनु हुँदैन, तपाईले इटालियन वा जर्मन भाषा पाउनुहुनेछ। '
Everton Soares Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
फोल्टालेजामा पछि उनको प्रेमिकालाई पछाडी छोड्ने सहमतिमा, एभरटनको दोस्रो चुनौतीले कूलर मौसमलाई नयाँ क्लबको वरिपरि महसुस गराएको थियो।
Temperatures पोर्टो एलेग्रे मा ठंडे बिन्दु नजिकै छोड्न सक्छ, जो अर्जेन्टिना र उरुग्वे संग सीमाहरु को नजिकै छ। रियो ग्रान्ड राज्यको सर्दमा सुल धेरै सख्त थियो कि एथटनले सोचेका थिए, तर क्लबले उनलाई समर्थन गरे।
क्लबको साथ शुरुमा, Everton ले आफ्नो उपनाम "Cebolinha"जुन शाब्दिक अर्थ"सानो प्याज"।
किन Everton Soares लिटिल प्याज भनिन्छ
यो उपनाम एक धेरै लोकप्रिय ब्राजीलियन कार्टुन चरित्र द्वारा प्रेरित भएको थियो र यो पनि किनकि उनले भर्खरै सब्जीको बोट जस्तो देखिन्छ।
क्लबमा बस्न पाएको छ वर्षपछि, ब्राजिल फुटबलको घटनाले 2017 मा Grêmio संग Copa Libertadores जीतने मा उनको टीम को मदद को उनको हस्ताक्षर को लागि आफ्नो घुटनों मा शीर्ष यूरोपीय क्लबहरु लाई भत्काउने।
ओभरटन सोरेस फेम स्टोरेजको उदय
ग्रेमिओका लागि एभरटनको प्रभावकारी मौसम ब्राजिलको कोचिंग कर्मचारीले उनीहरूलाई आफ्नो 2019 कोपा अमेरिकाका टोलीमा समावेश गर्न आश्वस्त पारे। एक्सएनएनएक्सएक्स कोपा अमेरिका टूर्नामेंटमा एथटनले एक मौसम वृद्धिको सामना गर्यो।
ओभरटन सायरस COPA अमेरिका विजय- उदयको प्रसिद्धि स्टोरी
उनको देशलाई ट्राफी जित्न मद्दतले उनीहरूले महाद्वीपका सबैभन्दा फुटबल गुणहरू बन्न थाले। 2019 कोपा अमेरिकी टूर्नामेंटमा बहुमूल्य ब्राजिलको सम्झनाहरू सधैं सम्झनेछ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
Everton Soares Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
एथटन सोरेससँग प्रसिद्धि बढ्यो, हरेक फ्यानको ओठमा प्रश्नहरू छन्; एभरटन गर्लफ्रेंड को हो? के उनले अझै पनि आफ्नो प्रेमलाई के छ जसलाई उनले आफ्नो करियरको लागि छोड्नुभयो? ...
यी प्रश्नहरूको उत्तरको बारेमा हामीलाई थाहा छ। तथापि, सफल फुटबलर पछि, एक ग्लैमरस प्रेमिका हो र अब पत्नी जो नाम बाट जान्छ isaranieri (शाब्दिक अर्थ लिसा रानीरी) उनको सामाजिक मिडिया खातामा।
Everton Soares र पत्नी
एभरटनको सामाजिक सञ्जाल खाताको निर्णय, यो स्पष्ट छ कि दुबै पक्षी पक्षीहरूले शनिबार शनिबार साँझको गाँठो बाँडे, डिसेम्बर 29 को 2018th।
एथटन सायरस आफ्नो विवाहको दिनमा
उनीहरूको विवाह गर्नुअघि दुवै युवतीहरू एक प्यारा छोरीको साथ आशिष् दिइयो जसमा एथटन धेरै मनपर्छ। यस तथ्यको कारण, यो हुन सक्छ कि लिसा रानीरी "एउटै गर्लफ्रेंड"जो पछि ओभरटनले ग्रीमीसँग खेल्न थाल्नुभयो।
Everton Soares र परिवार
प्रत्येक महान पछि छोरी एक साँच्चै अद्भुत छ पिताजी एभरटनको व्यक्तिमा। तल फोटो देखि न्याय गर्दै, यो उनको छोरी बिना संदेह एक मात्र व्यक्ति हो जसले आफ्नो हृदय चुरायो।
Everton Soares र बेटी
Everton Soares Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
Everton Soares जान्नको लागी व्यक्तिगत जीवन पिचबाट टाढैमा तपाईंलाई आफ्नो व्यक्तित्वको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत पुग्छ।
एभरटन सोर्स - उनको व्यक्तिगत जीवन को बारे मा
अफगानिस्तानको अफगानिस्तानमा एक अर्काको मृत्यु भएको छ। उहाँ अक्सर जान्नुहुन्छ के चाहानुहुन्छ र यो युवायुवतीमा आफ्नो परिवारबाट अलग हुनुको कारण हो।
उनको खेल्ने उपनामको बावजूद "सानो प्याज", एभरटन सधैँ फिर्ता लिइएको व्यक्तिको हो। उहाँ एक शांत व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले कहिल्यै पनि शिकायत गर्दैन, कुनै शब्द जो शब्द बोल्न बिना मान्छे मा हुन सक्छ।
Everton Soares Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - जीवन शैली
लाखौँ पाउण्डमा पैसा साँच्चै एभरटन सोर्सको लागि मूल्यवान छ किनभने तिनको मेहनती र एक पेशेवर फुटबलर बन्ने निर्णय।
पिच बन्द, एभरटनले उनको विदेशी कार र समुद्र किनारामा उनको पोष्टमा देखाएको जस्तो सुन्दर चित्र राख्छ। एक शक बिना, यो एक लाखपति जीवन शैली बनाउने।
इभरटन सोर्स- उनको जीवन शैली तथ्य। क्रेडिट खेलकुद
लेखन को समयमा, एवरटन, जो जीवित जीवन शैली को बावजूद आफ्नो धन सामाजिक मीडिया मा प्रदर्शित नहीं गर्छन। उहाँ आफ्नो प्रसिद्धिको प्रबन्ध गर्दै र पागल जस्तो खर्च नगरी चासो हुनुहुन्छ। समुद्र तटमा र समुद्रमा आफ्नो समय र पैसा बिताउने उनको भावनात्मक भलाइमा ठूलो प्रभाव छ।
Everton Soares लाइफसल्टल
Everton Soares Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
लेखनको समयमा, एभरटनको परिवारले हाल ब्राजिलको एक निजी र कम-महत्वपूर्ण जीवनलाई बाँचिरहेको छ भने paparazzi को बावजुद सधैँ प्रलोभनमा र सामाजिक सञ्जालसँग जोड्ने विभिन्न तरिकाहरू।
उनको आमा, पिता, भाइ बहिनीहरू र बहिनीहरू दुवैले हालै नै कठोर मानसिकतालाई उनीहरूको आफ्नै तर्फबाट फाइदा उठाउँदैछन्। एभरटनको आफ्नो आमाबाबु, भाइ, बहिनी र रिसेप्टर सहज छन् सुनिश्चित गर्न भक्ति पिच मा आफ्नो प्रतिबद्धता जस्तै हो।
Everton Soares Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
सन्दर्भ: एवर्टन भनेको हो जसले आफ्नो मसीही विश्वासको बारेमा धेरै खुल्ला छ। उहाँले आफ्नो क्यारियरमा हरेक अवसरको लागि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ।
Everton Soares धर्म
यहां सम्म कि उनको सोशल मीडिया अकाउंट मा जो 1.1 मिलियन अनुयायीहरु को लेखन को रूप मा पढ्छ, एवरटन को उनको मुक्तिदाता "यीशु" को आफ्नो मोनिकर को स्थान मा लिखित छ। अफ-पिच, उहाँ आफ्नो जीवनमा येशू नाटकको भूमिकाबारे निस्किनु भएको छ।
एभरटन सोरेस ईसाई धार्मिक विश्वास
टैटू तथ्य: एथटनको टटूको व्याख्या उनको कडा उत्थान र बेशक उनको ईसाई धार्मिक विश्वास संग जोडिएको छ। उनको टैटू को हरेक एक को लागी साबित भएको छ। तल फोटो हेर्दा, तपाईंले उसको दाहिने हात र येशू आफ्नो छातीमा घोस्ट राइडर टाउको टट जस्तो देखिन्छ भनेर पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ।
Everton Soares टैटू तथ्यहरू। क्रेडिट खेलकुद
Everton Soares Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Everton सोर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।